ओलीको विरोध गरेर कांग्रेसको साख फर्किंदैन प्रदीप पौडेलजी ! – YesKathmandu.com
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता प्रदीप पौडेलजी,
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कान्तिपुरमा खुला पत्र लेख्नु भएको रहेछ, लिंक मार्फत त्यो पढेँ ।
त्यसबारेमा तपाईंलाई पत्र लेख्नुअघि म तपाईंलाई मेरो सामान्य परिचय दिन्छु । तपाईंको पार्टीले २५ वर्ष शासनको बागडोर लिएर शेरबहादुर देउवा मार्फत राजालाई लोकतन्त्र बुझाएको देशको नागरिक म आफ्नो गुजारा चलाउन अहिले विदेशी भूमिमा श्रम गरेर आफ्नो परिवार पालिरहेको छु । मेरो दलीय राजनीतिक आवद्धता छैन । पहिलो संविधानसभामा माओवादीको ताण्डव देखेर संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा भावावेशमा मेरो परिवारका सदस्यहरुलाई मैले कांग्रेसलाई भोट दिनु भनेर टेलिफोनबाट सुझाव दिए बाहेक मेरो अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । खैर आफ्ना विषयमा अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु । तपाईंले ओलीलाई लेखेको पत्रको जवाफ ओलीको पार्टी एमालेका नेताले कसरी लेख्लान् मलाई मतलव छैन, तर केही वर्षयताका घटनाक्रमबाट आफूले गरेको अनुभुतीका आधारमा तपाईंसामु केही कुरा राख्छु ।
अव जाउँ तपाईंले ओलीजीलाई लेखेको पत्रमा ।
प्रदीपजी १ तपाईंले कान्तिपुरमा ओलीलाई लेख्नु भएको यो पत्रको जवाफ लेख्न बसिरहेका बेला त्यही कान्तिपुर दैनिकको भोलिपल्टको पेज नम्बर ११ मा मेरा आँखा परे । एउटा समाचार शीर्षक छ, तपाईं पनि हेर्नुहोला– जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता । माओवादीले उसको हिंसाकालमा चलाएको समानान्तर अदालतले गरेका लिखतलाई रुकुममा अहिले कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको कुरा त्यहाँ छ पढ्नु होला । सुरुमै मैले यो प्रसंग किन उठाएको हुँ भने तपाईंका पार्टी सभापति शेरबहादुरको निजी स्वार्थका सामु कांग्रेसलाई यसैगरी सिद्धान्तच्यूत बनाउँदै लैजानु भयो र शेरबहादुरका अनगिन्ती विचलनको तपाईंजस्ता युवाहरु दास बन्दै जानु भयो भने बेलुका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएर सुतेको तपाईं बिहान उठ्दा वाइसीएलको सी ग्रेडको कार्यकर्ता बन्ने दिन आउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग, आइजीपी प्रकरण, राजदूत प्रकरण र पछिल्लो पटक भरतपुर मतपत्र च्यात्ने प्रकरणमा तपाईंको पार्टीको भूमिका र चुनावमा तपाईंको पार्टीको गठबन्धनले यस सम्भावनालाई नजिक पुर्याएको छ । तपाईं कांग्रेसको भलो चाहनुहुन्छ भने ओलीका असल कामको विरोध गरेर होइन, शेरबहादुरका खराव काम सच्याएर मात्रै सम्भव छ प्रदीप पौडेलजी ।
प्रदीप पैडेलजी १
एउटा बदनाम सरकारमा हालीमुहाली गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तपाईंलाई केपी ओली विरुद्ध खुलापत्र लेख्नु पर्ने कारण किन उत्पन्न हुँदैछ रु लोकमा केपी ओलीको चुलिंदो लोकप्रियता र कांग्रेसको चरम सैद्धान्तिक पतन र क्षतिको न्युनिकरण गर्न तपाईंले पत्र लेखेको पत्र पढेरै स्पष्ट हुन्छ । जसको सही उपचार केपी ओलीको विरोध होइन तपाईंको पार्टी सच्चिनुबाट बाहेक अन्यत्रबाट सम्भव छैन ।
तपाईंले सुरुमै ओलीले अशिस्ट र अभद्र रुपमा कांग्र्रेस बिरुद्ध प्रचार युद्ध गरेको, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको सिटप्रति आश्चर्य ब्यक्त गरेको भनी आरोप लगाउनु भएको छ । हो, मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ– संविधान जारी गरेयता कांग्रेसले देश र देशको सिस्टम विरुद्ध निभाएको खलनायकी भूमिकाका सामु यति धेरै सिट कांग्रेसले कसरी ल्यायो रु सायद यो प्रश्न तपाईंले शेरबहादुरलाई सोध्नु पथ्र्यो– संविधान जारी गरेपछि मुख्य दलहरुबीच सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने नीति ल्याएर कांग्रेस किन संविधान विरोधीहरुको पुच्छर सुम्सुम्याउन गयो रु भारतीय नाकाबन्दी र तराईंमा हिंसाको विरासत केपी ओलीलाई जिम्मा लगाएको कांग्रेस किन अमानवीय नाकाबन्दीमा मौन बस्यो रु तराईको हिंसालाई शान्त बनाएर रत्नपार्कमा केही दर्जन ब्यक्तिको रिले अनसनमा सिमित गरेका र भारतीय नाकाबन्दीलाई झुकाएका केपी ओलीको अन्धविरोध गर्नु पर्ने वाध्यता कांग्रेसलाई किन आइपर्यो रु अव कहिल्यै नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्न नसक्नेगरी उत्तरी छिमेकी चीनसित ओलीले पारवहन सम्झौता गर्दा कांग्रेसलाई किन टाउको दुख्यो रु युगौं युगसम्म भारतीय नियन्त्रणमा नेपालको राजनीति अस्थिर राख्ने उद्धेश्यमा कांग्रेस किन सामेल भयो रु हो यिनै भूमिकाका कारण नेपाली नागरिकले कांग्रेसलाई नरुचाएका हुन्, जुन भूमिका नसच्याएसम्म ओलीको विरोध गरेर कांग्रेसको साख फर्किंदैन प्रदीपजी ।
जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईका ऐतिहासिक कालका भूमिका र उनीहरुले त्यसका आधारमा लेखेका आत्मकथाहरु पनि पढ्नुस् । आजको मितिमा बीपी कोइराला बाँचेका भए उनले पनि केपी ओलीलाई आफ्नो सच्चा उत्तराधिकारी भन्ने थिए । निजी स्वार्थले सिद्धान्तच्यूत भएका शेरबहादुर र शेरबहादुरको सत्ताको वरिपरी आफ्नो स्वार्थ रक्षा हुने देखेर तपाईंजस्ता युवा नेताको भूमिका देखेर पनि बीपी सायद खिन्न हुन्थे । माथि उल्लेख गरेका महाभियोगदेखि भरतपुरको मत गणना प्रकरणसम्म आइपुग्दा तपाईंलाई बीपी कोइरालाले निर्माण गरेको कांग्रेस कार्यकर्ता ठान्न कम्तिमा म सक्दिनँ प्रदीपजी । अझ प्रधान्यायाधीशमाथि माथि महाभियोग प्रकरणमा त मेरो सुझाव छ– राजनीतिमा सिद्धान्तको नै वकालत गर्नुहुन्छ भने सानेपाको तपाईंको पार्टी कार्यालयबाट बीपीको तस्बिर हटाएर मोहन वैद्यको तस्बिर झुण्ड्याए हुन्छ ।
तपाईंले केपी ओलीको सरकारसँग स्थानीय चुनावको कार्यसूची नै थिएन भन्नेसम्मको आरोप लगाउनु भएको छ । केपी ओलीले नै संसदबाट अनुमोदन गराएका तीन तहको निर्वाचनका कार्यसूची संसद सचिवालयमा गएर हेर्नुस् । यस विषयमा यति भन्न सक्छु ओलीको सरकार रहेको भए गतवर्ष मंसिरमा स्थानीय चुनाव सकिन्थ्यो र अहिले प्रदेश वा संघीय संसदको चुनावको माहौल तातिरहेको हुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले चुनाव टार्न कति पटक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नबाट भाग्यो रु ओली र नागरिकहरुको दवाव थेग्न नसकी वाध्य भएर बैशाख ३१ गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको चुनावी माहौल उत्कर्षमा पुग्न लागेका बेला त्यसलाई रोक्न दुई चरणमा चुनाव बाँड्यो । एक चरणको चुनाव भयो, अर्को चरणका लागि तीनवटा मिति फेरिइसकेका छन् । तपाईंको दल र माओवादी गठबन्धनले चुनाव चाहेको थिएन, चुनाव टार्न असफल भएर चुनाव सफल बनाएको जस लिन खोज्दै हुनुहुन्छ । चुनावप्रति तपाईंको दल इमान्दार भएको भए बैशाख ३१ गते नै देशभर चुनाव सम्पन्न भइसक्थ्यो । राजनीतिलाई बाह्य नियन्णमा लैजान तराईका विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको बेलुनमा हावा भरेर विदेशीका लागि स्ट्रेन्थ बनाइदिने काम तपाईंको दलले गर्यो ।
तपाईंको पार्टीका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाले क्षतविक्षत पारेको मधेस ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । नाकाबन्दी हस्तान्तरण गरेका थिए । भारत निर्भर नेपाल हस्तान्तरण गरेका थिए । एक सिलिण्डर ग्यासको १५ हजार तिर्नु पर्ने वजार हस्तान्नरण गरेका थिए । अस्पतालमा औषधी नपाएर छट्पटाइरहेका विरामी हस्तान्तरण गरेका थिए । भारतका जस्तासुकै सर्त स्वीकार नगरे नाकाबन्दी सहनु पर्ने विवशता हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसलाई पार लगाएर आत्मनिर्भरताको बाटो खन्ने काम ओलीले गरे । सायद तपाईंहरुसँग ओलीको जस्तो पूँजी नभएर छट्पटाइरहनु भएको छ र तीन तीन पटक अक्षम प्रधानमन्त्री भएर दरवारमा लोकतन्त्र बुझाएर हिंसा निम्त्याएका शेरबहादुर बेच्नु परेको छ । ओलीलाई तपाईंको खुलापत्रले तपाईंको त्यही लघुताभाषी मनोविज्ञान उजागर गरेको छ ।
ओलीले चीसँग गरेको पारवहन सन्धीकै कारण नाकाबन्दीको भारतीय अस्त्र कमजोर भएकोमा भारत पछुतो मानिरहेको छ । तपाईंका शेरबहादुर त्यसलाई कमजोर बनाउन पटक पटक दलाई लामाका कार्यक्रममा सहभागि हुनु भएको छ । मधेस शान्त बनाउने, मधेसमा अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व विकासका कार्यक्रम लैजाने केपी ओलीलाई भारतले तयार गरेको ‘मधेस विरोधी ओली’को नारा बेचेर गुजारा चलाउनु पर्ने वाध्यतामा तपाईं हुनुहुन्छ । प्रदीपजी तपाईंहरु सत्तामा हुनुहुन्छ । तराई मधेसका जनतालाई लाइन लागेर शान्तपूर्वक आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने वातावरण मिलाउनुस्, मेरो विश्वास छ त्यहाँ पनि ओली चुनिनेछन् ।
ओलीले मधेसीलाई झरेको आँप भनेको, समथर विहार र मधेसलाई एउटै देखेको भन्ने तपाईंले जुन दुश्प्रचार गरिरहनु भएको छ, त्यो ओलीले होइन ओलीका तर्फबाट तपाईंहरुले भनेको हो । सक्नुहुन्छ भने तपाईंहरुले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसका जनताले के के अधिकार पाउँछन् प्रष्टसँग कन्टेन्टमा गएर बहस चलाउनुस् प्रदीपजी ।
तपाईंले जसरी केपी ओलीले तराई पहाडलाई जोड्न नदिएको र कांग्रेसले जोड्न खोजेको तर्क दिंदै हुनुहुन्छ त्यसबाट मलाई लाग्छ तपाईंहरुले पढेको शब्दकोष र आम नागरिकले पढेको शब्दकोष नै फरक छ । पहाड र तराईलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै अलग प्रदेश बनाउँदा जोडिने र त्यहाँका लाखौं नागरिकले सडकमा उत्रेर हामी परापूर्व कालदेखि मिलेर बसेका छौं नछुट्याउ भन्दा फोडिने हुन्छ रु प्रदीपजीहरुको यस्तो अल्टर शब्दकोशले केही समय भ्रम बाँड्न सक्छ तर, ती सबै समाप्त हुन्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ ।
प्रदीप पौडेलहरुको अहिलेको दुःख के हो भने ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला जे जे कामको सुरुवात गरे त्यसलाई उहाँहरुले हावादारी भनेर उडाउनु भयो । नेपाल–चीन पारवहन र यातायात सम्झौता गरेपछि ओलीका विरुद्ध तपाईंहरु वालुवाटार अगाडि कागजका रेल बोकेर उडाउन जानु भएको थियो । आज तपाईंहरुको घोषणा पत्रको गातामै रेलको चित्र छ । २५ वर्षसम्म पटक पटक बहुमतको सरकार चलाएर देशका नागरिकलाई अरवको मरुभूमिमा उँटको हली बन्न वाध्य बनाउने तपाईंहरुलाई यहाँ रेल आएको, ग्यास, पेट्रोल र फलाम खानी चलेको, आफ्नै लगानीमा द्रूतमार्गहरु बनेको सह्य छैन । जनताले ओलीका तिनै योजना मन पराए, तपाईंको छटपटी यही हो र ओलीलाई तपाईंको खुलापत्रले मौन रुपमा प्रदर्शन गरेको मनोदशा पनि यही हो ।
यस्तो थियो प्रदीप पौडेलको लेख
रोषण कुमार शाक्य says:
ओली ले गरेका क़ेही राम्रा काम भनेको उसलाइ जे पायो त्यहि ज़िंदगी भर छुद्र बोल्न पाउने लाइसेंस हैन । शक्ति भनेको जनता को हात मा हूँछ तर लगाम नेता को हात मा, तर यस्को दुरुपयोग भएमा शासक को ग़ल्ती अन्तिम र जनतालाई अभिशाप को सुरुवात हूँछ । नाकाबंदी पछी का घटना आफु बाहेक अरुलाइ अरास्ट्र बादी देखने नस्लवादी सोच को प्रचार ले के समस्या को अन्त गरेको हो की सुरु हो त्यों सोच्ने को मनःस्थिति अनुसार फ़रक़ पर्छ ।
laxman prasad gyawali says:
100% correct answer to Pradip Paudel
अरविन्द धिताल says:
बहुदलीय राजनीती भनेकै कांग्रेसको राजनीती हो । आफुलार्इ कम्युनिष्ट भन्नेहरु पनि यो राजनितीमा आर्इसके। तर यही पद्धतीमा काग्रेस झन अगाडि हुनु पर्नेमा किन पछाडि ? यस्तो लठेउरो सभापती भएर हो कि ? सोचाैंन एकपल्ट ल ।
माओवादीको अपरिपक्व निर्णय, बन्नै सक्दैन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
भारतले मनोबैज्ञानिक युद्ध छेड्यो